Kurwadzisa Kwandakaita Mukurumbira Wangu neSocial Media ... Uye Zvaunofanira Kudzidza Kubva Izvo | Martech Zone
Muvhuro, Kukadzi 22, 2021 China, April 7, 2022 Douglas Karr
Kana ndambova nemufaro wekusangana newe pachiso, ndine chivimbo chekuti iwe ungandiwana ndiri munhu, anoseka, uye ane tsitsi. Kana ndisina kumbosangana newe iwe pachako, zvakadaro, ndinotya zvaunogona kufunga nezvangu zvichibva pahupenyu hwangu hwemagariro.
Ndiri munhu ane shungu. Ndine shungu nebasa rangu, mhuri yangu, shamwari dzangu, kutenda kwangu, uye zvematongerwo enyika. Ini ndinonyatsoda nhaurirano pane chero ipi yenyaya idzodzo… saka pakaitika pasocial media anopfuura makore gumi apfuura, ndakasvetukira pamukana wekupa nekukurukura maonero angu pane chero nhaurwa. Ndiri kunyatso kuziva nezve sei vanhu vanotenda zvavanoita pamwe nekutsanangura kuti sei ndichitenda zvandinoita.
Hupenyu hwangu hwepamba kukura hwakanga hwakasiyana zvakasiyana. Izvi zvinosanganisira maonero ese - chinamato, zvematongerwo enyika, zvebonde, rudzi, hupfumi… nezvimwewo. Baba vangu vaive muenzaniso wakanaka uye vakazvipira muRoma Katurike. Akagamuchira mukana wekumedura chingwa nechero ani saka pamba pedu paigara pakavhurika uye nhaurirano dzaigara dzakagwinya asi dzairemekedza zvisingaite. Ndakakurira mumusha waigamuchira chero hurukuro.
Kiyi yekumedura chingwa nevanhu, zvakadaro, ndeyekuti iwe wakavatarisa mumaziso uye ivo vakanzwisisa tsitsi nekunzwisisa kwawakaunza patafura. Iwe wakadzidza nezvekwavakakurira uye uye sei. Iwe unogona kunzwisisa kuti nei vaitenda zvavakaita zvichibva pane zvakaitika uye nemamiriro ezvinhu avakaunza mukukurukurirana.
Zvemagariro Midhiya Hazvina Kuparadza Mbiri Yangu
Kana iwe wakandiitira moyo murefu makore gumi apfuura, ndine chivimbo kuti iwe wakaona kushuvira kwangu kuita zvemagariro enhau. Kana iwe uchiri kutenderera, ndinotenda kuti iwe uchiri pano - nekuti ini nekusaziva ndakasvetukira mumasocial media headfirst ndakafara nemukana wekuvaka zvirinani kubatana uye kunzwisisa zviri nani vamwe. Kutaura raive dziva risina kudzika.
Mikana ndeyekuti dai waindiona ndichitaura pachiitiko, ukashanda neni, kana kutombonzwa nezvangu uye ukandiwedzera seshamwari pane chero yemagariro midhiya chiteshi… Ini ndakabatana newe online zvakare. Nzira dzangu dzekudyidzana nevanhu dzaive bhuku rakavhurika - ndakagovana nezve bhizinesi rangu, hupenyu hwangu, mhuri yangu… uye hongu… zvematongerwo enyika Zvese netariro yekubatana.
Izvo hazvina kuitika.
Pandakatanga kufunga nezvekunyora iyi posvo, ndaida kunyatsoidaidza Maitiro Ezvemagariro Akakanganisa Sei Mbiri Yangu, asi izvo zvingadai zvakaita kuti ndive nyajambwa nepo ini ndaive-wese-ndichida kutora chikamu mukufa kwangu.
Fungidzira uchinzwa kumwe kudanidzira kubva kune imwe kamuri uko vashamwari vari kupokana zvine mutsindo nezvenyaya yakati. Unomhanyira mukamuri, haunzwisise mamiriro acho ezvinhu, hauzive mamiriro emunhu mumwe nemumwe, uye unoshevedzera maonero ako ekutsvinya. Nepo vanhu vashoma vangazvikoshesa, vazhinji vanoona vangangofunga kuti iwe uri jekiseni.
Ndakanga ndiri jekiseni iro. Kupfuura, uye pamusoro, nekupfuura.
Kuwedzera nyaya iyi, mapuratifomu akaita seFacebook anga achinyanya kuda kundibatsira mukutsvaga makamuri ane ruzha rwakanyanya ane nharo dzakanyanya. Uye ndaive ndisingazive chokwadi nezve mhedzisiro. Sezvo ndavhura hukama hwangu nenyika, nyika ikozvino yaona kukanganisika kwekubatana kwangu nevamwe.
Dai ndanga ndanyora yekuvandudza (ini tag #goodpeople) iyo yakagovana nyaya yemumwe munhu akazvipira uye akabatsira mumwe munhu ... ndaizowana akati wandei gumi nemaviri maonero. Kana ini ndikakanda mubhawa pane imwe nhoroondo yezvematongerwo enyika, ini ndakawana mazana. Vazhinji vevateereri vangu veFacebook vakangoona rumwe rutivi rwangu, uye zvaityisa.
Uye zvechokwadi, vezvenhau vezvemagariro vaive vakanyanya kufara kuratidza maitiro angu akashata. Vanodaidza izvozvo Kubatana.
Izvo Zvemagariro Midhiya Zvinoshaya
Izvo pasocial media zvinoshaya chero mamiriro ezvinhu chero. Ini handikwanise kukuudza nguva dzese dzandaipa chirevo uye ndobva ndangonyorwa zvakapesana nezvandaitenda chaizvo. Imwe neimwe midhiya yenhau inovandudza kuti maalgorithms anokurudzira kusunda uye kudhonza mumadzinza evateereri vese vanoenda pakurwisa. Nehurombo, kusazivikanwa kunongowedzera kwazviri.
Chirevo chakakosha mune chero yekutenda sisitimu. Pane chikonzero nei vana kazhinji vachikura vaine zvitendero zvakafanana sevabereki vavo. Hazvisi kudzidzisa, zviri chaizvo chaizvo kuti mazuva ese ivo vakadzidza uye vanooneswa kudaviro kubva kune wavanoda uye wavanoremekedza. Kutenda ikoko kunotsigirwa zvizere nekufamba kwenguva nezviuru kana mazana ezviuru ekubatana. Sanganisa iko kutenda pamwe nezviitiko zvinotsigira uye izvo zvitendero zvakavharirwa mukati. Icho chinhu chakaoma - kana zvisingaiti - kutendeuka.
Ini handisi kutaura nezve ruvengo pano… kunyangwe izvozvo zvinosuruvarisa kuti zvingadzidze futi. Ndiri kutaura pamusoro pezvinhu zvakapfava… sekutenda musimba repamusoro, dzidzo, basa rehurumende, hupfumi, bhizinesi, nezvimwe. Ichokwadi ndechekuti isu tese tine zvitendero zvakadzika midzi matiri, zviitiko zvinosimbisa izvo zvitendero, nemaonero edu. yepasi akasiyana nekuda kwavo. Ndicho chinhu chinofanirwa kuremekedzwa asi kazhinji chisiri pasocial media.
Mumwe muenzaniso wandinowanzoshandisa ndeye bhizinesi nekuti ini ndaive mushandi kusvika ini ndaive nemakore angangoita makumi mana ekuberekwa. Kusvikira ini ndatanga bhizinesi rangu uye ndikashandira vanhu, ndanga ndisingazive nezvese matambudziko ekutanga nekushandisa bhizinesi. Ini ndanga ndisinganzwisise mirau, rubatsiro rwakaganhurirwa, accounting, matambudziko emari yekuyerera, uye zvimwe zvinodiwa. Zvakareruka zvinhu… senge chokwadi chekuti makambani anowanzo (zvakanyanya) kunonoka kubhadhara mavovoice avo.
Nekudaro, sekuona kwandinoita vamwe vanhu vasina kumbobvira vashanda chero munhu achipa maonero avo online, ini ndiri mukati mukupa yangu! Mumwe mushandi akaenderera mberi nekuita rake bhizinesi akandisheedza mwedzi yakati gare gare ndokuti, "Handina kumboziva!". Icho chokwadi ndechekuti kusvikira wave mune shangu dzemumwe munhu, iwe chete funga unonzwisisa mamiriro avo ezvinhu. Ichokwadi ndechekuti iwe haugone kusvikira wavepo.
Maitiro Ekugadzirisa Kwangu Midhiya Midhiya Mukurumbira
Kana iwe uchinditevera, iwe ucharamba uchiona kuti ndiri munhu akavimbiswa, anofunga munhu online asi kuti kugovana kwangu uye maitiro zvachinja zvakanyanya pamakore apfuura makore apfuura. Ndiwo wakave mugumisiro wakaoma wekurasikirwa neshamwari, kugumbura mhuri, uye… hongu… kutotadza kurasikirwa nebhizinesi nekuda kwayo. Heano zano rangu rekuenderera kumberi:
Facebook Shamwari Inofanirwa Kuva Shamwari Yechokwadids
Iwo maalgorithms muFacebook ndiwo akaipisisa mumaonero angu. Pane imwe nguva, ndaive neinosvika zviuru zvinomwe shamwari paFacebook. Kunyange ini ndainzwa kugadzikana kukurukura uye kuita nharo nemavara misoro neshamwari dzepedyo paFacebook, zvakaburitsa zvidzoreso zvangu zvakaipisisa kuvanhu vese zviuru mazana manomwe. Izvo zvaityisa sezvo zvakakunda iyo nhamba yezvakanaka zvidzoreso zvandakagovana. Yangu Facebook shamwari ndakangoona yakanyanya kupesana, yakaipa, yekunyomba mhedzisiro yangu.
Ini ndakachenesa Facebook pasi kungo pfuura shamwari dzinopfuura chiuru uye ndicharamba ndichideredza huwandu ihwohwo kuenda kumberi. Kune chikamu chikuru, ini ndinobata zvese izvozvi sekunge zviri kuenda kuruzhinji - kunyangwe ndinozvimaka nenzira iyoyo kana kwete. Kubatikana kwangu kwakaderera zvakanyanya paFacebook. Ndiri kudawo kuziva kuti ndiri kuona akaipisisa wevamwe vanhu, futi. Ini ndinowanzo dzvanya kuenda kune yavo mbiri kuti ndinyatso tarisa pane akanaka munhu wavari.
Ndakarega zvakare kushandisa Facebook kubhizinesi. Iyo Facebook algorithms yakavakirwa iwe kuti uite kubhadhara kuita kuti peji rako rionekwe uye ndinofunga rakashata zvechokwadi. Mabhizimusi akapedza makore vachivaka zvinotevera uye ipapo Facebook yakabvarura zvese asi zvakabhadhara zvakatumirwa kubva kuvateveri vavo… vachirasikirwa zvachose neinvestment yavakaita mukugadzirisa nharaunda. Ini handina basa kana ndikawana rimwe bhizinesi paFacebook, ini handisi kuzoedza. Pamusoro pezvo, ini handidi kumboisa panjodzi bhizinesi nehupenyu hwangu ipapo - izvo zviri nyore kwazvo.
LinkedIn Inongova YeBhizinesi
Ndichiri yakavhurika yakavhurika yekubatana nechero ani pa LinkedIn nekuti ini ndichagovana chete bhizinesi rangu, zvinyorwa zvangu zvine chekuita nebhizinesi, uye mapodcast angu ipapo. Ndakaona vamwe vanhu vachigovana zvemunhu pachezvako ipapo uye ndaizopa zano nazvo. Iwe waisazopinda mubhoardroom wotanga kupopotera vanhu… usazviita paLinkedIn. Iyo yako yepamhepo boardroom uye iwe unofanirwa kuchengetedza iro mwero wehunyanzvi ipapo.
Instagram Ndiyo Yangu Yakanakisa Angle
Pane hurukuro shomana kana isina, nekutenda, pa Instagram. Asi, iwo maonero mukati hupenyu hwangu izvo zvandinoda kunyatso tarisa uye kugovana nevamwe.
Kunyangwe pa Instagram, ndinofanira kungwarira zvakadaro. Yangu yakawanda bourbon muunganidzwa yakave iine vanhu vanobatana neni kunze kwekunetseka kuti ndinogona kunge ndiri chidhakwa. Kana yangu Instagram yakanzi "Yangu bourbon muunganidzwa", mutsara wemabhonzo andaunganidza angave akanaka. Nekudaro, peji rangu iri ini ... uye rondedzero yangu hupenyu hunopfuura makumi mashanu. Nekuda kweizvozvo, yakawanda kwazvo bourbon mifananidzo, uye vanhu vanofunga kuti ndakadhakwa. Oy.
Nekuda kweizvozvo, ndinoita nemaune mukuyedza kwangu kusiyanisa mifananidzo yangu ye Instagram nemifananidzo yemuzukuru wangu mutsva, nzendo dzangu, kuedza kwangu kubika, uye kuona kwakaperera muhupenyu hwangu hwega.
Vafudzi… Instagram hausi hupenyu chaihwo… ndichauchengeta saizvozvo.
Ini ndinogovana pachena pane yangu wega Twitter account asi ini zvakare ndine yehunyanzvi imwe ye Martech Zone uye Highbridge kuti ini ndakanyatso sekana. Ini nguva nenguva ndinoita kuti vanhu vazive mutsauko. Ndakavaita kuti vazive izvozvo Martech ZoneNhoroondo ye Twitter ichiri ini… asi ndisina maonero.
Chandinotenda nezve Twitter ndechekuti maalgorithms anoita kunge anoratidzira maonero akaenzana pamusoro pangu pane maTweets angu ane nharo. Uye… nhaurirano paTwitter dzinogona kuita rondedzero inofamba asi usinga pfuure nepakati perukova Ndine hurukuro dzinogutsa kwazvo paTwitter… kunyangwe ivo vari mugakava rinopisa. Uye, ini ndinogona kazhinji kupomhodza hurukuro iri kuita yekunzwa neshoko remutsa. PaFacebook, izvo hazviite senge zvinoitika.
Twitter ichave nzira yakaoma kwandiri kuti ndipe maonero angu… asi ndinoziva kuti zvinogona kukanganisa zita rangu. Mhinduro imwe yakatorwa kunze kwenyaya yehurukuro yese yeprofile yangu yese inogona kuperetera kuparara. Ini ndinopedza nguva yakawanda ndichifunga pamusoro pezvandinogovera pa Twitter kupfuura zvandakamboita kare. Nguva zhinji, ini handimbodzvanya kushambadza pane iyo tweet uye kuenderera mberi.
Ndiro Rakanakisa Mukurumbira Kusava Newe?
Zvichakadaro, ndinomira ndichitya vatungamiriri muindasitiri yangu vanoremekedzwa vakarangwa zvekuti havatombomira pasocial media. Vamwe vangafunga kuti humbwende… asi ndinofunga kuti kazhinji zvinoda hushingi hwakanyanya kuchengetedza muromo wako pane kuzvivhurira kushoropodzwa uye kukanzura tsika yatinoona ichikurumidza online.
Zano rakanakisa, zvinosiririsa, pamwe kuti usambotaura chero chinhu chinokakavara chinogona kumiririrwa zvisizvo kana kutorwa kunze kwechirevo. Pandinokura, ndipo pandinowedzera kuona vanhu ava vachikura mabhizinesi avo, vachikokwa kutafura zvakanyanya, uye vachiwedzera mukurumbira muindasitiri yavo.
Icho chiri chokwadi chiri nyore chekuti ndakanga ndaparadzanisa vanhu vasina kumbobvira vasangana neni pachiso, vasina kumboona tsitsi dzangu, uye vasina kumbobvira vaoneswa kune rupo rwangu. Kune izvo, ndinodemba zvimwe zvezvandakagovana pamusoro pemakore pamusoro pasocial media. Ndakatambanudzirawo kune vanhu vakati wandei uye ndikazvikumbirira ruregerero, ndichivakoka kofi kuti vandizive zviri nani. Ini ndinoda ivo kuti vandione ini zvandiri uye kwete yakaipa caricature iyo yangu yemagariro midhiya mbiri yakavaburitsa kwavari. Kana uri mumwe wevanhu ivavo… ndipe runhare, Ndingafarire kubata.
Hazvisuruvadze here kuti kiyi yemagariro enhau inogona kunge iri yekudzivisa kuishandisa zvachose?
ONA: Ndakagadzirisa zvido zvepabonde kune zvebonde. Mhinduro yakaratidza nenzira kwayo kushayikwa kwekubatanidzwa ipapo.
Tags: douglas karrFacebook mukurumbirainstagram mukurumbiralinkedin mukurumbiramukurumbira pamhepombirikiroevanhu vezvenhaumagariro enhautwitter mukurumbira
Kukadzi 22, 2021 na4:47 PM
"Izvi zvinosanganisira maonero ese - chitendero, zvematongerwo enyika, zvido zvepabonde, rudzi, hupfumi ... nezvimwe."
Iwe unozoonekwa sewazvino uye unosanganisirwa kana uchishandisa hunhu hwepabonde pachinzvimbo chekuda. Hatisi kusarudza kuve takarurama, ngochani, kana chimwe chinhu. Kuzivikanwa kwedu.
Feb 23, 2021 at 9:46 PM
Iyo ipfungwa yakanaka kwazvo, ini ndichagadzirisa iyo chinyorwa sezvo zviri chaizvo zvaive mweya wayo.
NDINONYANYA kuti wakanyora izvi. Zvinoratidza kuti hauna chawakadzidza. Mafungiro ako ekurangana, ruvengo, uye hupenzi hwese ndiro raive dambudziko. Vezvenhau havasi muvengi (sekutaura kwawaita) asi kuti unongova munhu ane ruvengo… Uchiri kurangarira tweet iya pawakataura neshungu kuti “vatsvagire glue regorilla” pamusoro pekubvinza kweradioactive kuJapan? Ndinorangarira… aive mazuva gumi apfuura. Ndinovimba kuti mukurumbira wako unoramba uchidzika munzira iyi.
Zack, ndatenda nemhinduro yako. Ini ndinofunga inotsigira chinyorwa changu uye maonero ezvekugarisana zvakanaka sezvauri pachena kuti une maonero akashata pandiri nepo vandinoshanda navo, vatengi, uye shamwari vasingadaro. Ndinokushuvirai zvakanaka.
Feb 26, 2021 at 1:22 PM
Wow! Doug inyaya yakanaka sei yakazadzwa nenjere pazvinhu izvo isu tese tinofanira kuziva zvakanyanya pachedu. Asi sezvawataura, kukosha kwekuita izvozvo kana uchiedza kuenzanisa kuve munhu uye zvakare kuita bhizinesi repamhepo kunotonyanya kunetsa uye kumonyoroka!
Zvinoita sekunge iwe neni takatanga pane iyi online uye isina kubatana kubatana makore mazhinji apfuura ikozvino, zvinoita sekunge zvagara zvakadaro. Saka akawanda makapu ekofi mumakofi akasiyana siyana uye mabhizinesi munzira. Hapana mhosva kune chero humwe hushamwari hwangu kubva kuCircle City mazuva, yako mune imwe yandinonyanya kudemba kuva kure kure nenzvimbo zvekuti hatigone kugovera mamwe kofi, nhaurirano, nharo, kuseka uye hongu, pamwe kunyange imwe bourbon ine. nguva dzose.
Heino kwauri, mabhizinesi edu uye social media. Ngatirambei tichifamba nemvura idzi nekuchenjerera isu pachedu uye nekubatsira mukutungamira vatengi vedu zvakachengeteka pakati pemahombekombe zvakare!
Kukadzi 26, 2021 na3:57 PM
Ndatenda! Uye takagara tichikoshesa ushamwari hwedu.